Nhau - Kutanga kwe304 bhodhoro remitambo
1.304 simbi isina chinhu ine yakasimba ngura kuramba uye mutengo wakakwira.
2. 304 simbi isina simbi inowanzo shandiswa munzvimbo dzine nharaunda dzakaomarara uye yakasimba kurwisa ngura.
3. 304 inotengeswa kunze simbi isina chinhu.
4. Iyo 304 simbi yekuchenesa isina chinhu ine nickel, saka haina ngura, uye 304 simbi isina tsvina uye haina ngura.
5. Iyo mukombe we thermos wakagadzirwa ne304 simbi isina chinhu ine chromium yakawanda, uye pamusoro pacho matte uye haina ngura
6.Iyo 304 simbi isina chinhu yekuchengetera hombodo haisi nyore kuita ngura nekuti iyo chromium-yakafuma oxide yakaumbwa pamusoro peiyo simbi muviri inogona kudzivirira iyo simbi muviri, kuti uwane kugona kwekunwa zvine hutano
Bhodhoro remvura yemitambo ine sefa basa
Iyo inotakurika yekuchenesa mvura ibhodhoro remvura remitambo richangobva kuoneka mumakore maviri apfuura. Chitarisiko chayo chakafanana neyechinyakare bhodhoro remvura, asi yemukati kusefa basa firita chinhu chinogona kukurumidza kusefa akasiyana akachena mvura senge yekunze mvura yerwizi, rwizi mvura, pombi yemvura mune yakananga kunwa mvura, iri nyore kune ekunze mitambo mamiriro chero nguva. Wana mvura yekumwa yakachengeteka uye yakavimbiswa chero kupi.
Maturusi echinyakare maturusi emvura maturusi anogona chete kuchengeta mvura yekunwa inodiwa kumitambo.
Kupeta bhodhoro remitambo
Inotakurika yekupeta mvura bhodhoro, bhodhoro muviri unogona kupetwa mushure mekunge mvura yadhakwa uye isingatore nzvimbo.
Kushandiswa kwemitambo kunoreva bhodhoro remvura rinoshandiswa kune dzimwe nhambo dzemitambo dzakanyanya, sekumhanya, kukwira, nezvimwewo. Inoratidzwa nekusimbisa zvakanyanya pahunhu hwesimbi uye nekuisa chisimbiso basa.
Silicone yekupeta mvura bhodhoro
Kunze kwekushandisa Kunongedzera kuzviitiko zvakaita sekukwira, mapikniki, kufamba, nezvimwewo Zvinoonekwa nehuremu hwakareruka uye nemhando dzakawanda dzekurembera mabhureki.
Zvinogona kutaurwa kuti bhodhoro remvura rekunze rinoshandiswa nevadzidzi rakafanana, asi nekuti rinoshandiswa nevana, rakasiyana mukugadzirwa uye kugadzirwa kubva kumabhodhoro emvura ane hunyanzvi. Bhodhoro remvura remitambo rinoshandiswa nevadzidzi rinonyanya kuve nyore uye nyore kushandisa, senge Iyo Inogona kushandiswa kuvhura iyo butiro pane plug.
Stainless simbi yemitambo bhodhoro
Stainless simbi mabhenefiti: akasimba, hapana zvinokuvadza zvinhu, asingakuvadzi kuvanhu, anopisa kupisa. Kukanganisa: Iyo imwechete-isina-kupisa kupisa conduction inokurumidza uye inopfeka inomira. Iyo yakapetwa-isina-isina simbi simbi mudziyo inoda yakakwira kugadzirisa kunyatso, uye majoini anowanzo tenderera kumvura kuvuza uye mabhakitiriya.